(sno) news » chelsea iyo real oo doonista cesc fabregas kaga horeeya barca. – CuffCare Systems – Home
(sno) news » chelsea iyo real oo doonista cesc fabregas kaga horeeya barca.
isbuucan ayaa Naadiga Barcelona ay kudhawaaqday in uu dhintay dalabkeedii Cesc, Kooxdana ay Suuqa kala iibsiga ugu tala gashay in ay uga soo Dukaamaysato lacag gaaraysa €40 million, taaas oo aad uga Yar Lacagaha ay kooxada Chelsea iyo Real ay kudoonayaan Saxiixa Laacibkan Reer Spain.
Jariirada El Mundo Deportivo ayaa sheegtay in weli Ciyaaryahan Cesc uu doonayo in uu kulaabto kooxdiisii hore ee Barca, uuna rajaynayo in Barca ay ku qancsiso Lacag kaash ah Macalinka Naadiga Gunners waa Arsene Wenger si uu ufasaxo.
Barcelona ayaa lasheegay in ay diyaar u tahay in ay dhiibto Cayaaryahanada Thiago Alcantara iyo Bojan Krkic si ay ula soo wareegto Ninkan Muhiimka ah ee qadka dhexe Kacayaara.
War kale oo haatan soo baxayna waxaa uu sheegayaa in Madaxweyne Real Madrid Mr Peres ay ka go’antahay in Cesc uu lasoo wareego Marka uu Furmo Suuqa kala iibsiga Cayaaaraha.
Mr Florentino ayaa sheegay in ay diyaariyeen Lacag gaaraysa €60 million si ay Arsenal uga soo qaataan Cesc, isagoo aamisan in lacagtaasi ay Arsenal qaadan doonto, Warkaana waxaa uu Albaabka uqaraacayaaa Malkiilaha iska leh Kooxda Chelsea Roman Abramovich oo Boorsada ay ubuuxdo dhawaan 50 Milyan kusoo qaatay Torres.
Warar kale Waxaa ay Tilmaamayaan in qiimaha ugu badan ee kooxda Barca ay waax kudoonayso uu gaarayo €40 million.
Xulka Wararka Cayaaraha iyo Dhalinyarada
Si Fudud nagu soo booqo www.Codkaadalka.com